4 Enti, me nuanom a medɔ mo a m’ani agyina mo, m’anigye ne m’abotiri,+ adɔfo, munnyina pintinn+ saa wɔ Awurade mu. 2 Mitu Euodia fo, na mitu Sintike nso fo sɛ wonnya adwenkoro+ Awurade mu. 3 Yiw, mesrɛ wo nso, me yɔnko kɔnduasoafo ɔnokwafo,+ kɔ so boa saa mmea yi a wɔne me abom adi apere+ asɛmpa no mu no, wɔne Klemen ne me mfɛfo adwumayɛfo+ a wɔaka a wɔn din+ wɔ nkwa nhoma no mu no.+ 4 Munni ahurusi wɔ Awurade mu daa.+ Meka bio sɛ, munni ahurusi!+ 5 Momma nnipa nyinaa nhu mo ntease.+ Awurade abɛn.+ 6 Munnnwinnwen biribiara nnhaw mo ho,+ na mmom momfa mpaebɔ ne nkotɔsrɛ+ ne aseda so mfa mo adesrɛ nto Onyankopɔn anim ade nyinaa mu;+ 7 na Onyankopɔn asomdwoe+ a ɛboro adwene nyinaa so no bɛbɔ mo koma+ ne mo adwene nsusuwii ho ban denam Kristo Yesu so. 8 Afei anuanom, biribiara a ɛyɛ nokware, biribiara a ɛsom bo, biribiara a ɛteɛ, biribiara a ɛho tew,+ biribiara a ɛyɛ fɛ, biribiara a wɔka ho asɛm pa, ɔbra pa biara a ɛwɔ hɔ ne biribiara a ɛsɛ ayeyi no, monkɔ so nsusuw saa nneɛma yi ho.+ 9 Nneɛma a musuae na mugye toom na motee na muhui wɔ me ho no, ɛno na monyɛ;+ na asomdwoe Nyankopɔn+ no ne mo bɛtena. 10 Midi ahurusi pii Awurade mu sɛ afei de moafi ase redwen me ho bio;+ ɛwom, na moredwen me ho nso moannya hokwan no. 11 Ɛnyɛ sɛ biribi hia me nti na mereka saa, efisɛ masua sɛ tebea biara a mewɔ mu no, mɛpene nea mewɔ so.+ 12 Minim sɛnea wodi hia ankasa,+ na minim sɛnea wonya ma ebu so nso. Biribiara ne tebea biara mu no, masua ɔmee ne ɔkɔm nyinaa, sɛnea wonya ma ebu so ne sɛnea wodi hia nyinaa.+ 13 Ade nyinaa mu mewɔ ahoɔden, nea ɔhyɛ me den no nti.+ 14 Nanso, moyɛɛ no yiye sɛ munyaa m’ahohia+ mu kyɛfa.+ 15 Nokwarem no, mo Filipifo, munim nso sɛ bere a mifii asɛmpaka adwuma no ase a mifii Makedonia no, asafo biara ne me annya ɔma ne ogye mu kyɛfa, gye mo nkutoo;+ 16 efisɛ mewɔ Tesalonika no mode nea mihia brɛɛ me pɛnkoro ne ne mprenu so. 17 Ɛnyɛ akyɛde na m’ani abere rehwehwɛ,+ na mmom aba+ a ɛma mo mfaso dɔɔso no na m’ani abere rehwehwɛ. 18 Nanso manya nneɛma nyinaa ma abu so mpo. Mayɛ mã, afei a Epafrodito+ de nneɛma a efi mo hɔ abrɛ me no, ade a ɛyɛ huam,+ afɔrebɔ a ɛfata+ na ɛsɔ Onyankopɔn ani yiye. 19 Mo nso, me Nyankopɔn+ bɛma mo nea muhia+ nyinaa sɛnea n’ahonyade+ pii no te denam Kristo Yesu so. 20 Afei anuonyam nka yɛn Nyankopɔn ne Agya no daa daa.+ Amen. 21 Munkyia+ ɔkronkronni biara a ɔwɔ Kristo Yesu mu+ mma me. Anuanom a wɔka me ho no kyiakyia mo. 22 Akronkronfo nyinaa kyiakyia mo, titiriw wɔn a wɔwɔ Kaesare fie no.+ 23 Awurade Yesu Kristo adom nka honhom a moda no adi no.+